Manchester United oo kalsooni ku qabta saxiixa Jadon Sancho… (Meeqa milyan ayey ku soo qaadanaysaa?) – Gool FM
(Manchester) 21 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay ku kalsoon tahay inay la saxiixan doonto xiddiga garabka uga ciyaara naadiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
Ciyaaryahankan da’da yar ayaa ka tagay Manchester City si uu ugu dhaqaaqo Westfalenstadion bishii Agoosto ee sanadkii 2017-kii, xiddiga heerka caalamiga ee reer England ayaana kooxda Bundesliga ku caddeeyay inuu yahay weeraryahan weyn.
Yeelkeede, 18-sano jirkaan ayaa bandhigga wacan ee uu ku jiro waxa ay soo jiiteen kooxaha Premier League qaarkood, iyadoo Man United ay doonayso inay la soo saxiixato xiddigan dhammaadka xilli ciyaareedka.
Dortmund ayaa doonaysa inay Sancho ku sii hayso dalka Jarmalka, laakiin London Evening Standard ayaa daabacday in Man United ay dareensan tahay in dalab 80 milyan oo gini ah uu kaga filan yahay in heshiiska lagu dhammeeyo.
Wargeyska ayaa ilo wareedyo ka soo xigtay in Manchester United ay kalsooni qabto, isla markaana ay sameynayso wax walba si ay ula soo saxiixato Sancho.
Sancho ayaa weli heshiiskiisa kooxda Borussia Dortmund waxaa kaga harsan muddo saddex sanadood ah.